China Resistance band mveliso kunye nabathengisi | Ukuqhayisa
Ukuchasana neebhendi kubonelela ngeendlela ezingenamda zokusebenza kwaye zilungele ukufudumeza-amalungu asezantsi naphezulu kunye nokwenza kusebenze izihlunu. Zisisixhobo esisebenzayo nesisebenza ngeendlela ezahlukeneyo esingasetyenziselwa ukwandisa ukomelela kunye nozinzo kumzimba ophezulu nasezantsi.
Izinto eziguquguqukayo kunye nozinzo: Amandla ethu / iibhendi zoncedo lokutsala zibonelela ngoqeqesho lokuchasa olusebenzayo. Ukugqibelela kuqeqesho lokumelana nomzimba kunye nonyango lomzimba ukunceda ukomeleza iigaments okanye izihlunu.
Ukufezekisa ukuncediswa kokutsalwa, iiPilates, ukuhamba, iPowerlifting, iChin-ups, iYoga, Ukolula, iGymnastics, unyango lomzimba, ukunyusa, kunye noncedo lwebarbell.
Iisikwati, iBench Press, amaGxalaba oPapasho, Ukuzifudumeza, Ukutsha kwamafutha. Ukusebenza ekhaya kunye nokuqina ekhaya okanye ejimini.
Yenziwe ngezinto zendalo ze-latex, i-elastic, yomelele, inxibe ukumelana kwaye iya kuhlala iflethi nasemva kokuzolula ngokweqile. Umgangatho wethu ulugqwesa ukhuphiswano lwethu olunikezela ngezinto ezingabizi kakhulu kunye nolwakhiwo olubi.
Isikhokelo sokuSetyenziswa kweMveliso:
(I-35 lbs): Eyona ilungele uqeqesho lwe-barbell yesantya kunye nokuhamba kwamagxa.
(Ii-55 lbs): Ukuqala kweebhendi zokumelana kunye noqeqesho lwebhanti ye-barbell okanye uncedo olulinganiselweyo lokutsala.
(I-65 lbs): Uxinzelelo oluphakathi kuqeqesho lokuxhathisa kunye nokunceda.
(I-100 lbs): Ilungele ukurhola ukunceda, uxinzelelo oluphezulu lokumelana kunye noqeqesho oluphambili lwebhanti.
(Ii-140 lbs): Unika uncedo olukhulu lokutsala kunye nomsebenzi omkhulu we-barbell.
(210 lbs): Elona thuba liphezulu loncedo lokutsala okanye umsebenzi we-barbell. Ibhanti enkulu kakhulu yezicelo ezizodwa.
ubude ububanzi ubukhulu
Ngeebhendi zokuzilolonga eziphathekayo onokuzisebenzisa ekhaya, eofisini, ehotele, ejimini, ngaphandle nangaphakathi ngexesha lokuhamba. Hlala ugcina iibhanti zokumelana nengxowa yakho yokuzivocavoca, naphi na apho ukhoyo.
Ukutsala phezulu kunokuzibandakanya kwaye uqinise phantse wonke umzimba wakho ongasentla ngokuhamba ngokulula kokuzitsala uye kwindawo ekutsalwa kuyo. Ilinganisela umsebenzi omninzi wokucinezela owenzayo, uphucula amandla omzimba wangasemva, kunye nokwakha umqolo oqingqiweyo.
Egqithileyo Vest yeQhinga
Okulandelayo: Ibhola eludongeni
Ibhendi yokuLwa komzimba